Fampidiran-tsolosaina miteraka kodiarana amin'ny induction heater
Home / Applications / Induction Brazing / Tube fantsom-bokatra vy
Sokajy: Induction Brazing Tags: brazing copper, fampidiran-doha, fantsona varahina avo frezy matetika, fantsom-panafody be frezy matetika, induction brushing copper, induction bronze copper tube, mpanamboatra brazing mpanamboatra, fantsona fandotoana, RF
Fampidiran-drivotra fampiroboroboana vongan-dipoavatra miaraka amin'ny RF Frequency RF Heating Equipment
Mba hampafana ny fivondron-tsoavaly vita amin'ny varahina ao anaty atmosfera tsy misy dikany amin'ny 1450 ° F ao anatin'ny segondra 45 noho ny tsy fisian'ny fonosana na fanadiovana asidra.
Ny fivoriam-pokontany mena, ny loko matevina manjelatra, mialoha ny endriny
Famatsiana herinaratra fanamafisana DW-UHF-10kW, tobin'ny hafanana lavitra miaraka amina capacitor microfarad 1.25 roa (capacitance 0.625 mfd.) Ary inductor (coil) namboarina manokana.
Ny fanandramana dia natao tao amin'ny ABS Mark 2 izay misy ny famonoana ny 95% Argon sy 5% gazy hydrogène. Ny inductor iray, izay natsofoka manokana, natokana hozatra efatra, dia nampiasaina mba hanomezana fanamafisam-peo tsara indrindra ho an'ny sehatry ny fivoriambe. Taorian'ny fanandramana voalohany natao niaraka tamin'ny faritra marevaka sy ny fandrefesana ny hafanam-po mba hametrahana profil de temps à température sy ny hafanana, dia nahatratra ny hafanana 1450 ° F ny 45 ° F mba hampangatsiaka ny endriky ny fiterahana.
Nahomby ny valiny tao amin'ny 1450 ° F tao anatin'ny 45 segondra. Koa satria ny hafanana dia mitarika amin'ny fivoriambe, dia mila fotoana kely kokoa ny fifindrana eo anelanelan'ny fivoriambe. Ny fampakarana ny fantson-koditra varahina dia fampiharana tena tsara induction heating.
milina fanosihosena vita amin'ny tanana